Waa maxay Nginx? - Khabiirka Cirka
Nginx [engine x] waa farsamo kale oo HTTP ah iyo adeegsade proxy ah. Nginx wuxuu u shaqeeyaa serverka proxy server, iyo adeegsade TCP / UDP wakiil guud, taas oo ay ku xaqiijinayso codsiyada websaydhka ee kala duwan si ay u sameeyaan booqdaha gaari website. Igor Sysoev waxay asal ahaan u soo dirtay adeeggan wakiilkan - methods of storage of wheat. Baakadaha kale ee martigelinta waxay isticmaali karaan hababka sida LAMP stack (Linux + Apache + MySQL + PHP) si awood u leh WordPress. Nginx wuxuu noqon karaa qaab awood leh oo ku saabsan habka loo yaqaan 'proxy proxy'. Waxaa lagama maarmaan, waxaa jira siyaabo badan oo webmasters u shaqaaleysiin karaan si ay u fuliyaan Nginx. Waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho dhamaan sifooyinkaa isla wakhtiga isticmaalka serverka Apache. Inta badan boggaga internetka ee lagu martiqaaday serverka Nginx oo ku shaqeeya nidaamka Apache. Waxaa jira madaxyada jawaabaha HTTPS iyo sidoo kale wakiilo kale oo u tixraacaya sida serverka websaydhka
Tilmaamahan Michael Brown, oo ah Semt Maamulaha Maareynta Macaamiil, wuxuu sharxayaa isticmaalka Nginx oo ah mid taagan. Halkii ay ku tiirsanaan lahayd farsamada server ee apache, waxaad isticmaali kartaa Nginx oo keliya sida serverka koowaad. Waxaa laga yaabaa inay jiraan tixgelin gaar ah marka la fulinayo Nginx on WordPress. Waxaa jira macluumaad muhiim ah oo uu qofku u baahan yahay inuu ogaado NGS. Tusaale ahaan:
Dhammaan qaababka waa suurto gal in guddiga maamulka ee qaabeynta qaabka server. Natiijo ahaan, ma jiro qaab-qaabeyn heer-heerar ah. Si ka duwan Apache's .htaccess ama faylasha web.config ee IIS, WordPress ma beddeli karo habka Nginx..
Habka loo ogolyahay shaqada ayaa ah mid ka duwan Nginx marka loo eego kuwa kale ee Apache kale
Nginx ma abuuri karaan qawaaniinta adiga kugu habboon. Nginx ma laha kartida nooca .htaccess noocan oo kale ah waa suurtagal in la isku wareejiyo server ka dhamaadka user
Waxaad isticmaashaa miisaan si aad u rakibtid raasumaalkaaga. Waa lagama maarmaan in la rakibo "index.php" kaasoo samayn kara guddi si loogu ogolaado in wax laga bedelo serverkaaga.
Isticmaalayaasha laga yaabo inay rabaan inay yeeshaan waxoogaa xaddidan oo xaddidan, waxay ku dhejin karaan htcanner extension PECL ee PHP. Nasiib darro, tani waa uun isbeddel xagga koritaanka ah oo la iman kara dhibaatooyinkeeda. U hubso inaad haysato hab ka hortag ah khaladka ka hor inta aadan qaadan farsamadan.
Habka Nginx ee tilmaamahan, malaha waa inaad horay u soo dejisay Nginx. Sidaa darteed, rakibidda iyo tilmaamaha ku saabsan sida ay u shaqeyso ma aha mid loo dhan yahay
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Nginx
Macaamiisha Nginx khariidadaha map.conf si toos ah mar kasta oo website cusub la abuuro. Xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan kartaa inaad dib u cusbooneysiiso Nginx si aad u hubiso in isbedelada ay saameynayaan. Nginx waxay sidoo kale ku duuban kartaa bogagga foomka php-fpm, markasta oo ay tahay goob cusub.
Website-yada waaweyn waxay isticmaali karaan Nginx sababta oo ah mid ayaa awood u yeelan kara in badan oo mawduucyo ah.
Waxaa jira calaamado calaamad ah, taasoo macnaheedu yahay inaadan ka walwalaynin wixii khasaare ah ama isbeddel ku yimaada dhammaan serverka.
Wixii milkiilayaasha boggaga u baahan udub dhexaad ah-proxy, nginx kuriddu waxay noqon kartaa hab muhiim ah. Naqshadeynta oo dhan waxay ka dhigaysaa malo guud oo ah in xididka goobta ama blogku uu joogo aqalka. Qodobka tixraaca wuxuu ku jiraa heerka laftirka laftiisa oo aan ka ahayn dhinaca isticmaalaha. Dadku waa inay wax ka beddelaan xeerarka marka ay bedelaan qaybaha bogga intarnetka sida ku darista blogga